Ny Clip 'The Legend of La Llorona' dia manasongadina ny herin'ny ratsy
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Ny Clip 'The Legend of La Llorona' dia manasongadina ny hery manevolenta miditra
Famantarana ny olana foana ny dian-tongotra matoatoa
by Trey Hilburn III Janoary 7, 2022
by Trey Hilburn III Janoary 7, 2022 11,147 hevitra
Ao amin'ny clip farany amin'ny ho avy The Legend of La Llorona manomboka mihodidina ny toetrantsika izay mitady fanampiana… miaraka amin'ny basim-borona mazava ho azy. Tsy fantany fa ny matoatoa manodidina azy dia tsy ho sahirana loatra amin'ny buckshot. Ny clip dia manao asa tsara manambara ny karazana horohoro mihoatra ny natoraly hatolotr'ilay sarimihetsika ho antsika.
Ny synopsis ho an'ny The Legend of La Llorona mandeha toy izao:
Toe-tsaina masiaka te-hamaly faty, manenjika fianakaviana tanora mitsidika an'i Meksika. Andrew sy Carly ary Danny zanany lahy dia nandeha tany amin'ny hacienda mitokana any Meksika mba hanao vakansy tena ilaina. Rehefa tafiditra tao an-tanàna izy ireo, dia nisy famantarana mampiseho ankizy tsy hita popoka. Mahafantatra ny angano momba ny “La Llorona” ny fianakaviana, ilay fanahy ratsin'ny renim-pianakaviana iray very hevitra izay miafina eo akaikin'ny sisin-drano ary mampatahotra ny fon'izay rehetra mahita azy. Mampijaly ny fianakaviana tsy misy indrafo i La Llorona, misambotra an'i Danny ary mamandrika azy any amin'ny lavaka tsy hita noanoa eo anelanelan'ny velona sy ny maty. Nampian'i Jorge (Danny Trejo, Machete, From Dusk Till Dawn) ilay mpamily fiarakaretsaka mahay, dia nihazakazaka nanavotra ny zanany lahitokana izy mianakavy, ka nitety ny ambanivohitra niharan'ny herisetran'ny jiolahimboto. Nahazo tanjaka sy hery ary nandao ny lalan'ny fahafatesana sy ny faharavana teo am-pifohazany, toa tsy azo sakanana i La Llorona. Saingy ny tsiambaratelon'ny lasa Carly dia mety hanome fahafahana handresy ny fanahy amin'ny farany.
Kintan'ny sarimihetsika Autumn Reeser, Antonio Cupo, Zamia Fandiño ary Danny Trejo.
The Legend of La Llorona Tonga amin'ny teatra manomboka ny 07 Janoary 2022 ary amin'ny nomerika manomboka ny 11 Janoary 2022.